Water Purifier – Rocket Online Shopping
Home ShopHealthWater Purifier
Categories: Health, Household, Kitchen.	Tags: clean water, portable water, purify water, water purifier, ေရစစ္, ေရသန္., ေရသန္.စက္.
၈၀၀၀ က်ပ္ ထဲ နဲ ့က်န္းမားေရး ကို အာမခံေပးနိုင္မွာပါ
8000 kyats (Norml ေခါင္းနဲ. ေရစစ္ေခါင္း အေပါက္ ႏွစ္ခုပါသည္)
5000 kyats (ေရစစ္ေခါင္း အေပါက္ တစ္ခုသာပါသည္)
Filter အပို – 4000 kyats
-နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအတွက် ဘက်စုံအသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပါ…
-ဒီ #Water_purifier လေး က ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှာတွေ ကို သန့်စင်ပေးပါတယ်
ကျန်းမာရေး အတွက် လဲ စိတ်ချ ရပါတယ်
ကလေးငယ် များဝမ်း ပျင် ဝမ်းလျော ရော ဂါ ကို လဲ ကင်းဝေစေပါတယ်
-၄ ကြိမ် တိတိ ရေ ကို သန့် စင်ပေးပါတယ် ဒါဆို ရေ ကြောင့်ဖြစ် တဲ့ရော ဂါတွေ ကို စိတ် ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး
အိမ်တိုင်း အတွက် အလွန် အသုံး ဝင် တဲ့ပစ္စည်း လေး ပါ အိမ်တိုင်းဆောင်ထားသင့်ပါတယ်
မြန် မြန် အော်ဒါ မှာ မှ စိတ်ချ ရမယ်နော်
၈၀၀၀ ကျပ် ထဲ နဲ့ကျန်းမားရေး ကို အာမခံပေးနိုင်မှာပါ
Made In Japan ဂျပန် ပစ္စည်း ဖြစ်တာကြောင့် Quality က တော့ စိတ် ချ ရပါတယ်
အသုံးပြုပုံအချို့ကိုလည်း ဗီဒီယို မှာပြသထားပါတယ်ရှင့်…
ဝယ်ယူသူထံသို့ပစ္စည်းနှင့်အတူငွေလက်ခံပြေစာပါပေးပို့ပေးပါမည်။အော်ဒါမှာယူလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းနံပါတ် ချန်ထားပေးပါ။ဆိုင်မှဝယ်သူထံဖုန်းခေါ်ဆို၍ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း အရာ၊အသုံးပြုပုံ၊ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အော်ဒါမှာယူရန်လမ်းညွန့်အကြံပြုချက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်…မှာယူထားသော ပစ္စည်းအား cancel ပြန်လုပ်ချင်လျှင် ၂၄နာရီ အတွင်း ပြုလုပ်ပေးရပါမည်)
8000 kyats (Norml ခေါင်းနဲ. ရေစစ်ခေါင်း အပေါက် နှစ်ခုပါသည်)
5000 kyats (ရေစစ်ခေါင်း အပေါက် တစ်ခုသာပါသည်)
? အကယ်၍ ယခုအချိန် မလိုအပ်သေးလို့ စိတ်မဝင်စားပါကလည်း နောက်တစ်ချိန် လိုအပ်လာသည့် အခါတွင် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန်၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ လိုအပ်သည့်အခါ လမ်းညွှန် နိုင်ရန် မိမိ၏ wall တွင် post ကို share ခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ပါသည်။
Open Time-9am To 5pm(ဆိုင်ပိတိချိန်တွင် ဖုန်းများလဲပိတ်ထားပါသည်။)
၃ထောင်ကျပ် (ဥပမာ – မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ မကွေး)
၄ထောင်ကျပ် (ဥပမာ – တောင်ကြီး၊ လားရှိုး၊ မြိတ်)
၅ထောင်ကျပ် (ဥပမာ – ကော့သောင်း၊ မြဝတီ၊ မြစ်ကြီးနား)
တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။
Gift, Girls, Household, Kitchen, Travel
Glassware Universal Bottle(or) oil can
Classic The food processor
Hand Exercise machine 20kg Ks15,000.00 Ks5,000.00
IOS HDMI TV Cable Ks20,000.00 Ks15,000.00
Computer Glass (Computerျကည့္မ်က္မွန္) Ks14,000.00 Ks7,000.00
Funloom or Gift for baby Ks6,000.00 Ks3,000.00
Travel Toothbrush & Toothpaste Cup - Hayan (Promotion) Ks12,000.00 Ks9,000.00